मन छुने मुना-मुनामदनको बिक्री उस्तै :: Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Audio, Video, Nepali Model, Actor, Actores, Interview
मन छुने मुना-मुनामदनको बिक्री उस्तै१० लाखप्रतिभन्दा बढीको कारोबार २७ पुस, काठमाडौं । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मर्ने बेला भनेका थिए रे-’मुनामदन बाहेक मेरा अरु सबै कृति जलाइदिए पनि हुन्छ ।’ देवकोटाले भनेजस्तो उनका अरु रचना नराम्रा होइनन् । सबै राम्रा छन् । तर, देवकोटालाई आफ्नो रचनामध्ये मुना-मदन सबैभन्दा बढी पि्रय थियो । देवकोटालाई मात्रै होइन, आम पाठकलाई समेत मुना-मदन उत्तिकै पि्रय थियो भन्ने कुरा यसको बिक्रीबाट समेत प्रमाणित हुन्छ ।
अहिलेसम्म देवकोटाको ‘मुना-मदन’ खण्डकाव्य १० लाख प्रतिभन्दा बढी बिक्री भैसकेको छ । साझा प्रकाशनका अनुसार यसवर्ष मात्रै १५ हजार २ सय ७४ प्रति पुस्तक बिक्री भएको छ । सबैले पढ्न सक्ने झ्याउरे खण्डमा आधारित र सरल रहेकाले मुना-मदनलाई अरु कुनै कृतिले जित्न नसकेको साझा प्रकाशन संचालक समितिका सदस्य अनिल पौडेलले भन्नुभयो । ‘हरेक पाठकलाई आफ्नो कथाजस्तो लाग्ने भएकाले मुना-मदनलाई बढी रुचाइएको हुन सक्छ’ पौडेलले भन्नुभयो ।
साझा प्रकाशनका अनुसार नेपाली बजारमा अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै बिक्री भएको पुस्तक नै मुना-मदन हो । ‘वाषिर्क १५ देखि २० हजार प्रतिसम्म बिक्री हुने गरेको छ’ साझाका प्रबन्धक रुद्र न्यौपानेले अनलाइनखबरसित भन्नुभयो । साझाका अनुसार गतसाल १८ हजार एकसय ५, दुईवर्ष अघि १६ हजार २ सय ६४ र त्यसभन्दा अघिल्लो साल १८ हजार २ सय ६८ प्रतिशत पुस्तक बिक्री भएको थियो । ‘साझाले अहिलेसम्म ५ सय ७० लेखकका १ हजार ३ सय ६४ शीर्षकमा पुस्तक निकालेको छ, तर मुना-मदनलाई कसैले जित्न सकेको छैन’ साझा प्रकाशन वितरण शाखाका सानुकाजी भण्डारीले भन्नुभयो ।
महाकवि देवकोटाले १९९२ सालमा लखेको यो कृति नेपाली भाषा प्रकाशिनी समितिले त्यसै वर्ष प्रकाशन गरेको थियो । त्यसपछि बिभिन्न प्रकाशन गृहले यसलाई प्रकाशित गर्न थाले । साझाले २०३३ सालदेखि यसको प्रकाशन थालेको हो । पहिलोपल्ट साझाले २० हजारप्रति मुना-मदन छापेको थियो । पछिल्लोपटक साझाले एकलाखप्रति प्रकाशन गर्यो । साझाले मात्रै १६ औं र अन्य गरी मुना-मदनको २५ औं संस्करण बजारमा आइसकेको छ ।
अरु कृति पनि उस्तै पठनीय
महाकवि देवकोटाका महाकाव्य, खण्डकाव्य, कविता, कथा, निबन्ध, उपन्यास, गीत, नाटक, बालसाहित्य, समालोचना लगायतका बिभिन्न विधाका कृति प्रकाशित छन् । शाकुन्तल, सुलोचना, महाराण, प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, वनकुसुम र प्रमिथस महाकाव्यमध्ये शाकुन्तल र सुलोचनाको व्यापार अरुको तुलनामा राम्रो रहेको साझाले जनाएको छ ।
देवकोटाको बालकृति अन्तर्गत सुनको बिहानीलाई बालबालिकाले बढी रुची राख्ने गरेको पाइएको छ । देवकोटाका ४८ वटा कृति अझै प्रकाशन भएको छैनन् ।
6 Comments on “मन छुने मुना-मुनामदनको बिक्री उस्तै”
रविन wrote on 12 January, 2013, 5:09
अतिनै सरल, ग्यानबर्दक र यथार्थपरक उत्कृष्ठ रचना हामी जस्ता गैर साहित्तिक व्यक्तिले पनि सजिलै बुझिने हुनाले. यस्ता महान कविलाई मेरो सदर प्रणाम !!!
mohan pakhrin wrote on 12 January, 2013, 6:47
Like or Dislike:20[जवाफ फर्काउनुहोस्]yasoda paudel Reply: January 18th, 2013 at 6:11 amUha jasto person lai salam salam salam………………
keshab paneru wrote on 20 January, 2013, 3:18
L P DEVKOTA KO CHARCHA CHALI RAHANE
andrew.kunwar wrote on 31 January, 2013, 6:20
muna madh isabest story i read every day i think any poem story not combindamuna madhan kyba i love it